ခိုကိုးရာမဲ့…မျက်မမြင်အဖွားနှင့် …သူ့မြေးလေးအတွက် …အိမ်ဆောက်လှူပြီးစီးခြင်း…ကုသိုလ် – ရှအေလငျး
ခိုကိုးရာမဲ့…မျက်မမြင်အဖွားနှင့် …သူ့မြေးလေးအတွက် …အိမ်ဆောက်လှူပြီးစီးခြင်း…ကုသိုလ်
ခို ကိုး ရာ မဲ့ မျက်မမြင်အဖွားနဲ့ သူ့မြေးလေးအတွက်
ဂေ ဟာ က အုတ်အပိုလေးတွေ ၊
ငါး ထပ် သားပြားလေးတွေလည်း ယူသုံးပေးထားတယ်။
(ဂေ ဟာ အဆောက်အဦး အလှူရှင်တွေ
ကုသိုလ် ၂ ထပ်ကွမ်းရပါစေ..)
အ လှူငွေလေး ပိုရလိုိ့
အစူးလေးတွေ ထ လာတဲ့အခါ
မျက်မမြင် အဖွားအိုကို စူးရှာလိမ့်မယ်..။
အိမ်သာကိုလည်း အိမ်နဲ့ တစ်ဆက်ထည်း
ညရေး ညတာ မြွေပါး ကင်းပါး မစိုးရိမ်ရတော့..။
စုစုပေါင်း အလှူရငွေက………… 2377600
အိမ်ဆောက် ကုန်ကျငွေက …. 1835550
အဲဒီပိုငွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်က
ကျွန်တော်တို့ သူ့အတွက် အလှူခံပေးထားပြီး
ငွေတိုးချေးပေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံ ၆ သိန်းထဲ
စုစုပေါင်း ၁၀ သိန်းကျော်က ရတဲ့ အတိုးလေးကို
လစဉ်သုံးလို့ သူတို့မြေးအဖွား ဘဝလေး
ခိုကိုးရာမဲ့ မကျြမမွငျအဖှားနဲ့ သူ့မွေးလေးအတှကျ
ဂဟောက အုတျအပိုလေးတှေ ၊
ကုသိုလျ ၂ ထပျကှမျးရပါစေ..)
အစူးလေးတှေ ထ လာတဲ့အခါ
မကျြမမွငျ အဖှားအိုကို စူးရှာလိမျ့မယျ..။
အိမျသာကိုလညျး အိမျနဲ့ တဈဆကျထညျး
ညရေး ညတာ မွှပေါး ကငျးပါး မစိုးရိမျရတော့..။
စုစုပေါငျး အလှူရငှကေ………… 2377600
အိမျဆောကျ ကုနျကငြှကေ …. 1835550
အဲဒီပိုငှကေို လှနျခဲ့တဲ့ ၃ နှဈလောကျက
ကြှနျတျောတို့ သူ့အတှကျ အလှူခံပေးထားပွီး
ငှတေိုးခြေးပေးထားတဲ့ ပိုကျဆံ ၆ သိနျးထဲ
စုစုပေါငျး ၁၀ သိနျးကြျောက ရတဲ့ အတိုးလေးကို
လစဉျသုံးလို့ သူတို့မွေးအဖှား ဘဝလေး
အရေးကြုံရင်သုံးဖို့.. ခန္ဓာကိုယ်ထဲ …ဘယ်နေရာမှာပဲ ကျောက်တည်တည်၊...